China Pasteurizer & Sterilizer fekitori nevatengesi | Higee
Nzira dzakasiyana dzePasteurizer kana sterilizer senge Tunnel mhando pr plat sterilizer yakagadzirirwa uye yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa nemutengi kune zvimwe zvinwiwa.
1.Tunnel Rudzi Pasteurizer-Spray Sterilizer
Iyo michina inotora kutenderera inopisa mvura yekupfapfaidza mbichana, inodziya mvura pre-kutonhora, kutonhora kwemvura kutonhora-nhanho kurapwa kana yakawanda-nhanho kurapwa, sterilization uye kutonhora nguva zvinoenderana nemushandisi zvinoda, frequency kutonga, otomatiki kutonga uye yakakwira kushandisa michina.
* Iyo inotora yakanyanya kupisa tembiricha polypropylene (HTPP) keteni ndiro uye inotora maJapan magetsi emagetsi. Iyo fuselage inogadzirwa nesimbi isina chinhu.
* Yakakwirira-mhando epurasitiki pajira riya neketani ndiro, inogona kushanda pakakwirira tembiricha kwenguva yakareba (-98), ipfupi-refu tembiricha yakakwira 104 ° C;
* Solid koni yakafara-kona kona kamwene, kuyerera kwekupararira kwakaenzana uye kwakatsiga, uye tembiricha munda inogara iri;
* Yakakwana mashandisirwo eakawanda simba kupisa kupora matekinoroji, simba kuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza;
* Tembiricha yekupisa Pt100, yakanyanya kuyera kurongeka, kusvika ± 0.5 ° C;
* Multi-maitiro musanganiswa, anonzwisisika maitiro, anogona kubata akasiyana siyana ezvigadzirwa;
* Sterilization tembiricha inodzorwa ne PLC yekubata skrini.
* Iyo yakazara yekugadzirisa nguva frequency kutendeuka kudzora, inogona kugadziriswa zvinoenderana neyekugadzira maitiro;
* Yakagadzirirwa otomatiki kudyisa uye kuburitsa mashandiro easina-denderedzwa PP mabhodhoro, mabhegi epurasitiki, denga katoni, girazi mabhodhoro, magaba uye zvimwe zvigadzirwa, uye shanduko kune otomatiki irikupa yekugadzira tambo inotsvedza;
* Ipa vashandisi nesevhisi yekuparadzira yekuyedza masevhisi, shandisa nyanzvi masisitimu, online kuongorora kwekushisa tembiricha panguva yese yekugadzira
* Iine otomatiki kudzora kweiyo tembiricha tembiricha, isina nhanho kugadziridzwa kweiyo mbereko nguva:
* Ive inoshandiswa zvakanyanya mumarudzi akasiyana-siyana emabhodhoro, emumagaba easidhi zvinwiwa, zvinwiwa zvemagetsi, doro, zvinonhuwira uye zvimwe zvigadzirwa kutonhora uye kutonhora;
* Ichi chishandiso chinogona kugadzirwa zvinoenderana neiyo sterilization mamiriro uye zvigadzirwa zvekugadzira zvinoiswa pamberi nemushandisi.
2.Pasteur ndiro sterilizer
Doro rekudzivirira rinonyanya kushandisa 72 ° C, 27PU kukosha (sterilization unit) tekinoroji kuuraya mbiriso uye zvimwe zvinosvibisa masosi mudoro, kuitira kuti igone kuchengetedza zvinovaka muviri zvebhiya uye yenguva-refu yekuchengetera nguva pasi pemamiriro ekudziya kwekudzivirira mbichana. Pasteurization inopedzwa mukati memasekondi makumi matatu, kuchengetedza kuravira kwakanaka uye kuravira
Dhiraini yedhiraini inomanikidzwa nepombi kubva muitiro yapfuura uye inotumirwa kune sterilizer yekushandura preheat. Ipapo inopinda muchikamu chekuvhiya uye inodziyiswa uye yakasviba nemvura inopisa pa75 degrees Celsius. Yegumi nemanomwe nzira inopinda inobata chikamu pa72 ° C yenguva dzose tembiricha sterilization Mushure mekushandisirwa preheat, inotonhorera ne 0-2 ℃ ice mvura. Chikamu chinotonhodza zvinhu chinotumirwa pazasi pe4 - kune tangi isina mbichana kana muchina wekuzadza wekuzadza.
Pashure: Water treatnebt system
Zvadaro: Oiri kupuruzira muchina mutsetse
Pasteurizer uye Sterilizer